Sarotra ny miaina : azo arindra anaty fanajana ny hafa anefa izany – Gasy Egypte
Sarotra ny miaina : azo arindra anaty fanajana ny hafa anefa izany
“Rehefa lavitra ny tany niaviana tokoa ka mivahiny an-tanin’olona dia miova daholo ny zavatra rehetra toy ny fomba amam-panao, ny toetry ny fiaraha-monina, ny toe-tany sy ny toetr’andro, sns… Ilaina tokoa ny fahaizana mandanjalanja ny fihetsika sy izay atao rehetra ka anatin’izany ny fanajana ny hafa.”
Ny faran’ny herinandro lasa teo moa dia nisy tranga iray izay tena nanaitra ny saiko ary tsy nety ny eritreritro raha tsy hizara izany anaty lahatsoratra. Teto amin’ny renivohitra “Caire” no nisehon’ilay tantara, nahiditra am-ponja ny vehivahy iray mpizaha-tany nohon’ny horonantsary navoakany tamin’ny pejy Facebook-ny mahakasika ireo toe-javatra tena nahasorena azy nandritra ny fivahinianany teto Egypta. Niampy teny mahery sy fanaratsiana ny mponina sy ny tanàna moa izany ka nitarika avy hatrany ny fisamborana azy. Mety manontany tena ianao hoe, ahoana no nahatratrarana azy?
Tena tsotra ary tsy mba manano-sarotra ny fikarohana ny toerana niavian’ilay video tamin’ny tambazotra serasera noho ireo fitaovana avo lenta sy ari-fomba hanan’ny fanjakana egyptiana sy ny polisy manokana misahana izany. Noraisim-potsiny ilay vehivahy ary navoaka an-gazety sy tamin’ny fahitalavitra aza ilay tranga (izay no nahalalako azy). Miditra eo amin’ny sehatry ny fifanarahana ara-diplomatika ny firenena roa tonta noho io vehivavy io sy ny famotsorana azy satria tena nihitatra sy lasa lavitra ny raharaha.
Tsy natao hampitahorana na hampitebiteby ny mpamaky ny fampahafantarana izao zava-misy izao fa kosa mba hakana lesona ny amin’ny ho avy, indrindra amin’izay mety fihetsika ataontsika.
Tsy midika velively izany fa mijaly sy ampahoriana ny olona mivahiny amin’ny tany arabo (averiko foana izay mba ahafahan’ny tsirairay manitsy ny fomba fijery) fa kosa tena misy lalàna mifehy ary ara-bakiteny ny fampiharana azy.
Inona no lesona tsara azo sintomina?
Tena sarotiny amin’ny fireneny ry zareo ary vonona hiaro izany ny amin’izay mety fanaratsiana na fanambaniana ataon’ny hafa. Firifiry ny Malagasy manao izany?
Voarakitra anaty lalàna avokoa ireo azo atao sy tsy azo atao ka na iza na iza mandika izany dia iharan’ny sazy, tena manan-danja ny fitsarana sy ny hasin’ny lalàna. Mba ahoana re raha atao tahak’izay ihany koa ny any Madagasikara ? Tsy atao mitovy amin’ny lalàna misy amin’ireto firenena arabo ireto akory fa atao mifanaraka amin’ny kolotsaintsika ary azo ampiharina ihany koa.
Misy sivana avokoa ny sary na horonan-tsary mivoaka anaty Facebook, Twitter, Instagram… ireo izay tsy mendrika na mifanohitra amin’ny kolotsaina dia voafafa ary azo atao tsara ny misambotra ireo manaparitaka izany. Tsy ilay lalàna momban’ny “cybercriminalité” akory no ratsy rehefa nolaniana tany Dago vao tsy ela akory fa kosa mila mahay mamaritra ny tena dikany mba ahazoana misambotra ireo olona tena voasokajy ho nanao “délit” na ilay “crime”. (Azonareo an-tsaina angamba ireny video niparitaka tanaty facebook ireny)
Inona kosa no tokony asiana fanovana?
Tsy mety koa anefa ho an’ilay firenena ny minia manapi-tsofina sy tsy mijery ny zava-misy sy ny lesoka eo amin’ilay firenena ka na hatramin’ny vahiny aza leo sy sorena. Ilaina ny mihaino ny hevitry ny hafa mba ahafahana manatsara ireo toe-javatra nahazoana kiana.
Mety tsapa ho mafy ihany ilay sazy sy fisamborana avy hatrany kanefa azo natao tsara ny nadefa azy nody teo noho eo ary noraràna tsy hiditra eto Egypta intsony. Tsy voatery ho sazy tena enjana vao afaka hanitsy ny fitondra-tena ny olona iray fa azo natao tsara ny fampitandremana azy.
Fehiny: Mba hampirindra ny fivahiniana an-tanin’olona (tsy ny firenena arabo irery ihany), ilaina ny fanajana ny fiaraha-monina, ny kolotsaina, ny lalàna, ny mponina… ny hafa. Izany dia ahazoanao manokana tombony amin’ny fitondra-tena mendrika ary ihany koa manatsara ny fifandraisanao amin’ny hafa.
Adin’ny samy goavana, tsy misy manaiky ny hilefitra
12 Thoughts to “Sarotra ny miaina : azo arindra anaty fanajana ny hafa anefa izany”
outstanding job! https://www.keoc1.com
Acheter Du Dermipred En Ligne Hydrochlorothiazide Mastercard Discount No Script Needed Generic Secure Ordering Dutasteride Cash Delivery buy generic cialis Acquisto Levitra buy accutane online cheap Strep And Amoxicillin
Kamagra Veloce Doxycycline For Cheap cialis 5 mg Levitra 10mg Forum Macrobid Tablets Medication Cash Delivery Online Propecia Lower Amount
Dapoxetina Portaria 344 Dapoxetina Costo buy generic cialis online Levitra 10mg Orange Isotretinoin Free Shipping
Cialis Comprar Andorra Cialis Casero Proscar O Propecia Principio Activo viagra Levitra Kosten
Caracteristicas De Propecia cialis 5mg Cialis Apotheke Osterreich Cialis viagra levitra kaufen rezeptfrei Metronodizole Discount
Levitra 20 Mg Foro Cialis 20 Dosage Cialis Super Active Generique levitra brand online Effet Secondaire Mifepristone
Vendita Cialis Milano Cialis Non Prescription Needed Usa Dosage For Cephalexin For Animals buy cialis online Levitra Dizionario Zithromax For Toddler
How To Buy Levitra Cialis In Offerta venta de viagra y cialis Levrita Isotretinoin Website Next Day Store By Money Order Cialis Farmaco Da Banco
Zithromax Heart Arrhythmia Vivanza 20mg finpecia canada Tadacip 20 Online Meglio Cialis O Levitra
accutane discount card Precio Cialis Levitra Viagra buy viagra online Promethezene Without Prescription
Cipro Recall cialis without prescription Cialis 20mg Teilen